Mitondra Amboaram-Peon-Jorery ny Vanim-potoanan’ny Andro Mafana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2016 7:34 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Nederlands, Español, Italiano, English
Jorery Higurashi (Tanna japonensis). Sary avy amin'ny Wikimedia.
Ny Jorery no feo Japoney amin'ny vanim-potoana mafana. Na any ivelany any ambanivohitra izany na ao anaty tanàna, dia tafiditra tsara amin'ny fiainana andavanandro ao Japana itony bibikely itony hany ka maro amin'ny Japoney no afa-mamantatra ireo karazany amin'ny alalan'ny antso ataon'izy ireo.
Misy karazany maro ireo jorery mipoitra amin'ny fanombohan'ny vanim-potoana mafana. Raha mbola zanany tsy ary elatra ry zareo dia miaina any ambanin'ny tany, ka any no mihinana fakan-kazo, ary rehefa lehibe, dingana efa ary elatra kosa dia lasa irony bibikely tsy manaikitra olombelona irony fa mandany ny androny mihira amin'ny fanantenana sao dia mahazo sakaiza iaraha-monina.
Misy antony ve mahatonga ny jorery ho maro dia maro tahaka izao isan-taona? Siantifika Japoney iray no nahavaha ny ankamantatry ny fahamaroana faoben'ny jorery.
Mampiavaka ny jorery ny fiaraha-mivoaka amin'ny isa maro dia maro. Sady tsy maharo tena no tsy afa-manidina haingana, lasibatra mora ho an'ireo mpihinana azy ireto bibikely ireto. Ny fahatsapana ho voaaro ao anatin'ny fahamaroan'isa dia midika fa afa-miavotena ela araka izay tratra miaraka amin'ny namany ny jorery vitsy an'isa mandra-pahalanin'ny [hafa] azy.
Tafiditra lalina ao anatin'ny vanim-potoana mafanan'i Japana ny jorery, izay fantatra amin'ny teny Japoney ho “semi,” ka misy ireo olona sasantsasany ao Japana no mamoaka lahatsarin'ireo karazany maro sy ny fiantsoana mampiavaka azy ao amin'ny Twitter.
Nanamarika toy izao ao amin'ny gazety miteny anglisy Japan Today i Philip Kendall:
Eo ho eo amin'ny 30 ny karazana jorery eto Japana, ary ny feonkiran'izy ireo dia hafahafa kokoa noho ny tamin'ny farany. Matetika amin'ny tele sy ny sarimiaina [anime] no ampiasana ny feon-kiran'ny jorery ao anatin'ny karazany “minmin-zemi.”
Ka ity ary ny feon'ny minmin-zemi:
Mihatony mangatsiaka kokoa aho rehefa maheno minmin-zemi… (´∇｀)
Malaza noho ny feony mirohodrohona ny abura-zemi:
Abura-zemi. Eny, navoakako ity taorian'io.
Miverina ato an-jaridainanay ny kumza-zemis! Sambany aho no naheno azy ireo tamin'ity taona ity!
Ity jorery kely manana anarana lava ity dia nomena anarana taorian'ny antso manavaka azy manokana: “tsuku-tsuku boushi, tsuku-tsuku boushi”:
Tsukutsukuboushi!! ( ^ω^ )
Ny antsom-pitarainan'ny higurashi-zemi matetika dia mitranga amin'ny faramparan'ny volana Aogositra sy ny fanombohan'ny volana Septambra, miantsoantso ny fialan'ain'ny andro mafana sy ny fanombohan'ny fihintsanan-dravina:
Rehefa mandre ny kiakam-pahafatesan'ny higurashi-zemi aho, sy ny fambaran'ny maripana mangatsiaka kokoa, dia fantatro fa ho tapitra ny andro mafana ary manakaiky ny fihintsanan-dravina.
Mazava loatra fa hiaraka hipoitra ireo karazan-jorery, izay hiafara amin'ny horikoriky ny antso isan-karazany. Toy izao ary ny minmin-zemi sy ny tsukutsukuboushi miara-mihira:
Miarahaba maraina ny rehetra! mahafinaritra ny toetrandro androany eto Yokohama, andro tsara andalovana ambany aloky ny hazo. Toy izao ny minmin-zemi sy ny tsukutsukuboushi miara-mihira. Enga anie isika rehetra hisitraka andro mahafinaritra hafa indray!